See And Be Seen: လူနဲ့တူလို့ပေးတဲ့လက်မှတ်
Why you left the blog foralong time? I read from the reader thats why I arrived here today, this also is reallyanice post, thoughtful one, thanks.
ပိုစ့်လေးက စောင့်ရကျိူးနပ်ပါပေတယ်။ အစ်ကိုများ စာရေးတော့ဘူးလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ စာပြန်ရေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုစ့်အမြဲ တင်နိုင်ပါစေ။
သုံးသပ်ထားတာကို သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်။ များများရေးပါဦး။း)
တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တိုင်း ကိုယ့်အမှားတွေ လိုတာလေးတွေပြန်ပြန်မြင်လာလည်..။ စောင့်ရကျိုးနပ်တယ်..။ ကျွန်တော်တော့ certificate of being stupid/lame/bla bla တွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချီးမြှင့်လိုက်ပါကြောင်း.။
oh...i just know how it is there...very good article.